कला/मनोरञ्जन Archives - Page2of 13 -
काठमाडाैँ । मिस नेपाल २०२० को उपाधि नम्रता श्रेष्ठले जितेकी छन् । शनिबार राति सम्पन्न ग्राण्ड फिनालेमा २० प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै श्रेष्ठले मिस नेपालको २६ औं संस्करणमा उपाधि हात पारेकी हुन् । उनलाई ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०१९’की अनुष्का श्रेष्ठले ताज पहिराएकी हुन् । नम्रताले त्रैमासिक भत्ता र पुरस्कारको रुपमा २ लाख ...
अमिताभका छाेरा अभिषेकलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टी
काठमाडौं। बलिउडका चर्चित सुपरस्टार अमिताभ बच्चनलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ भेटिएको छ। उनको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको कोरोना परिक्षण गरिएकोमा अमिताभका छोरा नायक अभिषेक बच्चनलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको हाे । भारतीय मिडियाका अनुसार, कोरोना संक्रमण देखिएपछि बच्चनलाई मुम्बईको नानावटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।...
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्रकी कलाकार तथा नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी देवी शाहले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारको व्र्यवहारको बारेमा बोल्दा सहयोग र समर्थन गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएकी छन्। केही दिन अगाडिबाट सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले आफूमाथि चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्दा भोगेको दुर्व्यवहारको बारेम...
बलिउडमा ६५ कटेकामाथि किन लगाइयाे प्रतिबन्ध?
मुम्बई । विश्वभर फैलिएकाे कोरोना भाइरसकाे कहरले बलिउड क्षेत्र नराम्राे सँग प्रभावित भएकाे छ। साेही क्रममा काेराेना कहरले वृद्ध कलाकारको गाँस खोस्ने अवस्था आएकाे छ। बलिउड फिल्मको छायांकनमा ६५ वर्षभन्दा माथिका कलाकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयपछि यस्तो अवस्था आइपरेको हो। स्मरण रहोस्, महाराष्ट्र सरकारले आगामी २० जुनद...
बलिउड अभिनेता साहरुखको अफिसमा राखियो कोरोना संक्रमित
एजेन्सी । बलिउड नायक साहरुख खानकाे अफिसमा काेराेना भाइरसकाे संक्रमितलाइ राखिएकाे छ। साहरुख र गौरी खानले सरकारलाई आग्रह गरेको करिब एक महिनापछि अब उनीहरूको अफिस क्वारेन्टिनमा परिणत भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार साहरुखको अफिसमा छ जना कोरोना कोरोना संक्रमितहरूलाई राखिएको छ । शनिबारदेखि बीएमसीले ६ जनालाई साहरुखको...
सलमानसँग फार्म हाउसमै थुनिइन् ज्याकलिन
मुम्बइ। बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिज अहिले सलमान खानको पनवेलस्थित फार्महाउसमा सलमानसँगै छिन् । ज्याकलिन सलमानसँग उनको फार्महाउस गएकी थिइन् तर लकडाउनका कारण उनी त्यहीँ अड्किएकी हुन । उनीहरूले केही समय एकसाथ भएको खबर लुकाउन चाहिरहेका थिए । तर, पछि दुवैले एक अर्काको तस्वीर सेयर गर्दै एकसाथ रहेको जानकारी फ्यानहरू...
अभिनेत्री प्रियंकाको केही हट तस्बिर(फोटो फिचर)
काठमाडौं । सरकारले देशभर गरेको लकडाउनका कारण सेलिब्रेटीको जीवन घरमै सीमित भएको छ ।हालै विवाह गरेकी नायिका प्रियंका कार्कीले हनिमुन मनाउन नभ्याउँदै देशमा लकडाउन सुरु भयो । त्यसयता उनी घरभित्रै श्रीमानसँग दिन बिताइरहेकी छिन् । प्रियंकाले अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीसँग फागुन १५ गते विवाहबन्धनमा बाँधिएकी थिइन्। अहिले य...
लकडाउनमा कसरी बिताउछिन् दिन सन्नी लियोनी?
काठमाडाैँ। लकडाउनका कारण अहिले सम्पूर्ण मानिसहरु घरभित्र नै बसिरहेका छन् । भारत मे ३ सम्म लकडाउन भएका कारण बलिउडकर्मी पनि घरमा थुनिएका छन् । अभिनेत्री सन्नी लियोनी पनि घरमा नै थुनिएकी छिन् । उनी आफ्नो श्रीमान र तीन बच्चाको साथ बस्दै आएकी छिन् । लकडाउनमा बस्नु सजिलो नभएर पनि बस्न अत्यावाश्यक भएको उनले बताइन् । सन्नील...
कति वर्षकी भइन् रबिना टन्डनकी छोरी राशा?
काठमाडौं । बलिउड नायिका रबिना टन्डनकी छोरी राशा थडानी १५ वर्ष पुगेकी छिन् । रबिनाले सन् २००४ मा अनिल थडानीसँग विवाह गरेकी थिइन् । अनिल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हुन् । रबिना र अनिलले सन् २००३ मा ‘स्टम्प्ड’ फिल्मको सेटमा डेटिङ सुरु गरेका थिए, त्यसको एक वर्षपछि दुईले विवाह गरे । सन् २००५ मा जन्मिएकी राशाले शनिबार आफ्नी आमास...
काठमाडौं– पुर्व मिस नेपाल शृंखला खतिवडा र भ्लगर शिसन बानियाको प्रेम सम्बन्ध अब छर्लंग भएको छ । धेरैले उनीहरु बिच प्रेम सम्बन्त्र रहेको आकलन गरेपनि दुवै जनाले प्रेम सार्वजनिक रुपमा प्रेम स्विकार गरेका भने थिएननन् । लुकी चोरी घुमघाममा रमाउने उनीहरुले अब भने खुलेरै प्रेम प्रकट गरेका छन् । शृंखलाले पहिला पहिला सम्बन...